Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Boeing na ALAFCO mezue usoro maka ụgbọelu 20 737 MAX 8
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Technology • Transportation • Akwụkwọ akụkọ USA
ALAFCO dị na Kuwait, onye na-eweta ngwaahịa agbazinye ụgbọ elu azụmaahịa, nwere 40 737 MAXs ugbu a n'usoro.
Boeing na ALAFCO Aviation Lease and Finance Company (ALAFCO) kwubiri iwu maka 20 ọzọ 737 MAX 8s na 2017 Dubai Airshow, na-eme ka akwụkwọ iwu nke ndị nwe ụlọ maka ụgbọ elu MAX.
ALAFCO nke dị na Kuwait, onye na-eweta ngwaahịa agbazinye ụgbọ elu azụmaahịa, nwere 40 737 MAXs n'usoro. A mara ọkwa ahụ, nke ọnụ ahịa ya ruru $ 2.2 na ọnụahịa ndepụta ugbu a, dị ka nkwa na Paris Air Show.
Adel A. Albanwan, onye isi nchịkwa ndị isi, ALAFCO kwuru, "Ndị ahịa anyị na-adabere na arụmọrụ-mmanụ, ntụkwasị obi na ụgwọ ọrụ dị ala iji nwee ihe ịga nke ọma na ụgbọ elu 737 MAX ga-egbo mkpa ndị ahịa anyị, ma kwado ọganihu ALAFCO n'ọdịnihu." "Anyị enweela ihe ịga nke ọma na ezinụlọ 737 n'oge gara aga ma nwee obi ike na 737 MAX ga-aga n'ihu na-enyere aka ịzụlite azụmahịa anyị."
Ezinụlọ 737 MAX na-enye mgbanwe kachasị, ntụkwasị obi na arụmọrụ na ahịa otu ụzọ, yana pasent asatọ na-akwụ ụgwọ arụmọrụ karịa onye isi ya.
"Anyị nwere obi ụtọ ịzụlite mmekọrịta anyị na ALAFCO ma kwado mgbasawanye ụgbọ mmiri ha," ka Boeing Commercial Airplanes President & CEO kwuru Kevin McAllister. "Ike 737 MAX 8 nwere ike ife efe karịa asọmpi ahụ mgbe ọ na-eji obere mmanụ ọkụ bụ otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara ndị ahịa dịka ALAFCO ji nye aka mee 737 MAX ụgbọelu na-ere ngwa ngwa na Boeing akụkọ ihe mere eme."
737 MAX karịrị iwu 4,000 niile ruo taa. Ezinaụlọ MAX jikọtara teknụzụ ọgbara ọhụrụ CFM International LEAP-1B, nkuaka Advanced Technology na ndozi ndị ọzọ iji nyefee arụmọrụ kachasị elu, ntụkwasị obi na nkasi obi ndị njem na ahịa otu ụzọ.